Discussion About PHP Programming - phpmyanmar.com
Discussion About PHP Programming
Posted By - Ko Ko - December 17, 2006
Summary : Web Developement Seminar Organized By NaviStar Myanmar.
Show Myanmar Version
A discussion about PHP programming was made ataseminar held at MICT Park (an IT park) on 18th November 2006, 1400hr.
U Minn Myat Soe from NaviStar Myanmar gave an opening speech
This seminar was organized by NaviStar Myanmar (an internet hosting company). The subject on "PHP Programming" was discussed by U Htay Win (Total Myanmar) and U Win Htein Win (Gusto Software) discussed about ASP .NET 2.0.
About 170 interested people attended the seminar and many interesting question were asked at the end of the discussions, especially about PHP.
Organizer - NaviStar Myanmar (Professional Web Hosting & Design)
ppt slides on discussion of Php
Php ပရိုဂရမ်မင်း အကြောင်း ဟောပြောပွဲ။
မြန်မာပြည် တွင် ပထမ ဆုံး ပြုလုပ် သည်ဟု ယူဆ ရသော "PHP Programming" အကြောင်း ဟောပြော ပွဲ ကို ရန်ကုန်၊ လှိုင်မြို�့ နယ်၊ MICT Park တွင် ၂၀၀၆ နိုဝင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီ အချိန် တွင် ကျင်ပ ပြုလုပ် ခဲ့ ပါသည်။
NaviStar Myanmar မှ ဦးမင်းမြတ်စိုး မှ အဖွင့် စကား ပြောကြာ။ စဉ်။
အဆိုပါ ဟောပြောပွဲ ကို NaviStar Myanmar မှ ဦးဆောင် ကျင်းပပေး ခဲ့ပြီး၊ PHP Programming အကြောင်းကို ဦးဋ္ဌေးဝင်း (Total Myanmar) မှ ၎င်း၊ ASP .NET 2.0 အကြောင်းကို ဦးဝင်ထိန်ဝင်း (Gusto Software) မှ ၎င်း၊ အသီးသီး ဟောပြော သွားကြ ပါသည်။
တက်ရောက် ကြသူ ဝါသနာ ရှင်များ။
စိတ်ဝင်စား သူ ဝါသနာ ရှင် ၁၇၀ ခန့် တက်ရောက် ခဲ့ကြပြီး၊ ဟောပြော ပွဲ အပြီး ပြုလုပ် သော questioning အချိန် ၌ PHP အကြောင်း သိလို သည်များ ကို စိတ်ဝင် စားစွာ မေမြန်း သွား ကြ ပါသည်။
Posted as - [news]
0 comment submit comments
All photograph,logos, articles, comments and trademarks etc, in this site are property of their respective owners.All the rest (c) 2006 by PhpMyanmar.com.Using Code Igniter Frameworks, Hosted by PheonixMyanmar.com.